तिनाउले खर्च बढाउँदा नाफा घट्यो | गृहपृष्ठ
Home तिनाउले खर्च बढाउँदा नाफा घट्यो
तिनाउले खर्च बढाउँदा नाफा घट्यो
माघ १३, काठमाडौं (अस) । चालू आवको दोस्रो त्रैमासमा तिनाउ विकास बैङ्क लिमिटेडले खर्चको विषय बढाउँदा नाफा घटेको छ । बैङ्कले गत आवको तुलनामा कर्मचारी खर्च २८ प्रतिशत, ब्याज खर्च ८४ प्रतिशत र अन्य सञ्चालन खर्च ४२ प्रतिशले बढाएपछि नाफा घटेको छ ।
गत आवको तुलनामा नाफा २२ प्रतिशतले घटेर रू. ३ करोड ९९ लाख पुगेको छ भने खुद ब्याज आम्दानी १८ प्रतिशत घटेर रू. ८ करोड पुगेको छ । बैङ्कको सञ्चालन मुनाफा ३४ प्रतिशत घटेर रू. ५ करोड २० लाख पुगेको छ । बैङ्कले चालू आवको दोस्रो त्रैमासमा रू. ९५ लाख ३ हजार खराब कर्जा सङ्कलन गरेको छ ।
बैङ्कले दोस्रो त्रैमासमा रू. ४ अर्ब ३३ करोड निक्षेप सङ्कलन गरी रू. ३ अर्ब ५२ करोड कर्जा प्रवाह गरेको छ । जगेडा कोषको रकम २५ प्रतिशत बढेर रू. ११ करोड १५ लाख पुगेको छ । बैङ्कको निष्क्रय कर्जा शून्य दशमलव २८ प्रतिशत रहेको छ ।